Dhageyso Xogta Daahsoon: Maxaa ka cusub diyaaradii berdaale lagu soo riday | SMC
Home WARARKA MAANTA Dhageyso Xogta Daahsoon: Maxaa ka cusub diyaaradii berdaale lagu soo riday
Dhageyso Xogta Daahsoon: Maxaa ka cusub diyaaradii berdaale lagu soo riday
Baariys la sameeyay sababta keentay dhicitaanka diyaaradda, annago la hadalnay ehelada dadkii diyaaradda ku dhintay, shirkadii lahayd diyaaradda, xubno ka tirsan guddiga baadhista ee saddex geessoodka ah, wasaaradda duulista ee Soomaaliya iyo dad goobjoogayaal ah. Waxaa is weydin mudan, maxayse dowladda uga aamustay shilka? ma la helay sanduuqii madoobaa ee diyaaraddu oo laga heli karo xogta sidii ay diyaaradu u dhacday? sido kale yaa ka masuul ah shilka?.
Diyaaradda dhacday ayaa waxaa lahaa shirkadda African Express waxayna ka diiwaan gashaneyd dalka Kenya, laanta socdaalka hawada ee Kenya oo warqad soo-saartay May 5th 2020 ay ku sheegeyso inay heyso xogta dhicidda diyaaradda ayna ku dhinteen 6 ruux Muwaadan reer maayland ah, iyada oo intaa ku dartay inay xiriir la sameyn doonto laamaha ay quseyso ee Soomaaliya.
May 5th 2020 war qoraal ah oo ka soo baxay Xafiiska Madaxtooyada Kenya ayaa lagu sheegay inay labada Madaxweyne Uhuru iyo Farmaajo ka wada hadleen baaris lagu sameeyo shilka diyaaradeed ee Bardaale, dhanka kale dowladda Soomaaliya aya sheegtay in la sameynayo guddi saddex geesood ah, Kenya, Soomaaliya iyo Itoobiya Waa yaab qof denbiga galaayo oona gudilagu lagu daraayo.
War qoraal ah oo ay AMISOM soo-saartay May 5th 2020 ayay ku sheegtay in diyaaradda dhacday markii ay dageysay ay ka degtay jiho qaldan waa siday hadlak udhigeen, waxayna ku dartay warbixintu intaa in ay halkaa joogeen ciidammo aan ahayn AMISOM oo Itoobiyaan ah. Sidoo kale waxaa warbixinta lagu xusay inay shilka ku dhinteen shaqaalaha diyaaradda oo ahaa shan qof una kala dhashay Kenyan oo 3 qof ah iyo 2 qof oo Soomaali ah.
Xiriir ay SMC la sameysay qaar ka mid ah ehelka iyo qareennada marxuumiintii ku dhintay diyaaradda ayay dhammaan isku raaceen ineysan jirin cid ka socota dowladda Soomaaliya ama guddiga baarista oo la wadaagtay xog ku aaddan dhicista diyaaradda,iyo cidda riday.
SMC oo xariir la sameysay masuuliyiin ka tirsan shirkadda African Express ayaa ogaatay ineysan jirin xog rasmi ah oo ay dowladda Soomaaliya la wadaagtay shirkadda, waxayna intaa ku dareen inay cabsi iyo walwal ka qabaan inay waayaan caymiska ay shirkaddu ku jirtay sabab la xadhiidha dowladda oo aan war rasmi ah ka soo-saarin sida diyaaraddu u dhacday iyo cidda leh masuuliyadda shilka dhacday. Mas’uul qariyay magaciisa oo ka tirsan African Express ayaa yiri “ waxaan wali dowladda ka la’nahay xitaa warqad noo qora aad ku caddeyneysaan in diyaarad lagu soo riday Bardaale, si aan u helno xaqa dadkii ku dhintay diyaaradda”. Sidoo kale waxuu sheegay ineysan jirin wax warbixin ah oo ay shirkaddu ka heshay guddiga baarista iyo wasaaradda.
Waxaa sidoo kale xiriir la sameysay xubin ka tirsan guddiga baarista oo aan magaciisa qarinay sababo amni dartood ayaa noo sheegay in la kala diray guddigii baarista ee ka koobnaa dowladaha Kenya, Soomaaliya iyo Itoobiya taariikhdu markey aheyd May 24th 2020. Waxa uuna intaa noogu daray inay guddigu warbixin u gudbiyeen Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista hawada Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomaar.
SMC oo xubinta guddiga hor dhigtay su’aal ah maxaa ka jira wararka sheegaya in guddiga baarista aysan helin sanduuqa madow ee diyaaradda ayaa ka meermeeray inuu si cad uga jawaabo waxa uuna ku gaabsaday inay guddigu gudbiyeen warbixin loona sheegay inaysan ka hadlin arrinkaas, isla su’aashaan ayaan weydiinay mas’uul sare oo ka tirsan Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada waxa uuna warkiisa ku soo koobay “waa la heli karaa waana la weyn karaa”.
Xiriir aanu la sameynay wasiirka duulista Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Oomaar ayuu noosheegay in aysan weli dhameystirney warbixinta, balse waxuu ka gaabsaday inuu ka jawaabo in la kala diray guddigii uuna hayo warbixinta ay soo diyaariyeen guddiga.
Faadumo Xasan Buulo oo ka mid ah dadka deegaanka Bardaale oo la hadahsay SMC ayaa xaqiijisay iney maqashay dhawaqa rasaas ka hor inta aysan diyaaraddu dhacin.
Previous articleDhageyso Qiimaha Alaabta Electoronikada Magaalada Baydhabo Oo Laga Dareemaya Isbadel.
Next articleDhageyso:-Wasiir Jamaal” Shaqo ay qaban karaan Soomaali ayaa Ajaanib ku qabtaan Xalane”